မိုး နှင်.အတူ ..... | LAMINTAYAR
I live in Hlegu town ship -Phaungyi in Yangon Division.i was born in july 1987. I haveayounger sister and parents altogether4person.I want to be friend anybody.
Free Blog Content 1.
ကျွန်တော်၏ မိတ်ဆွေများရဲ. အားပေးစကား ဟာ ကျွန်တော်အတွက် စာရေးနှိင်ဖို.အား ပါ...
ရောက်ရင် Violin လေးတီးပြီးမှပြန် ပါနော်...
English video songs (5)
My notes.. (1)
ကျန်းမာရေး ....... (5)
တရားနာချင်သူများအတွက် ....... (1)
ထူးဆန်း လေ.လာဖွယ်........... (8)
နည်းပညာ ........ (1)
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း အမှတ်တရ....ဇူလိုင် (၁၉ ) (1)
မိတ်ဆက် ........ (1)
လိုအပ်မယ်ထင်သော အရေးကြီးသော site များ......... (2)
ဝိညဉ် တစ်ခုရဲ. ဆန္ဒ (1)
သတင်း video...... (5)
အချစ် တွေ အကြောင်း...... (2)
အလွန်ကောင်းသော အင်္ဂလိပ်စကားပုံလေးများ .......... (1)
မေမေ သို. ...... (1)
ရေးမိရေးရာ ဝတ္ထုတို...... (1)
ရေးမိရေးရာ အတွေး တချို. ..... (2)
မိုး နှင်.အတူ .....
ဒသန မဟုတ်တဲ. ကျွန်တော်ရဲ. အတွေးစိတ်ကူး... (၁)
ကျွန်တော်.ဆီလာလည်ဖြစ် တဲ.သူငယ်ချင်းများ ကျွန်တော်...
Posted by lamintayar at 8:23 AM Labels: Tags.......
" မိုး " ဟုတ်တယ် မိုး မှာ သူတို.ဆုံတွေ.ခဲ.ကြတယ် ............ ဒီနေ.လဲ သူ ထီးမပါရင် ကူညီပေးရန် ကောင်လေး ထီးကို အသင်. ယူလာမိတယ် ကျောင်းသို. ရောက်သောအခါ သူမရှိတဲ.နေရာကွက်လပ်လေးပဲမြင်နေမိတယ် ...။
စိတ်ထဲမှာ အတွေးပေါင်းစုံနဲ. နေများမကောင်းသလား ပေါ. မနေ.က မိုးတွေ ကအရမ်းရွာလွန်းတယ် ကျောင်းဆင်းချိန်မှာ ထီးမပါ ပဲမိုးရေထဲမှာ မသိများနေလားသလား ထီးမပါပဲ ပျော်ရွင်စွာလမ်းလျောက်နေတဲ. ကောင်မလေး အခုတော.ကျောင်းမလာ ကျောင်းတက်တော.မယ် ကောင်မလေး မလာပါ သေချာပါပြီ သူနေမကောင်းဖြစ်တာ ....။
စိတ်ထဲမှာ ရေရွတ်နေမိတယ် ကောင်မလေး ရယ်ဘာလို. ပေါ.ဆရတာလဲပေါ. အခုတော.နင်နေမကောင်းဖြစ်ပြီပေါ. ငါစိတ်တွေပူတယ်ကောင်မလေးရယ် နင်နေကောင်းပါစေ မနက်ဖြန် ကျောင်းအမြန် တက်နှိင်ပါစေ ငါမနေတတ်လို.ပါ ငါစိတ်တွေပူလိုက်တာ ထိုနေ.တနေ.လုံး ကောင်လေး စာလဲကောင်းကောင်း လိုက်မလုပ်နှိင်ပါ စာအုပ်ထဲမှာ ကောင်မလေးနာမည်တွေပဲ ချရေးနေမိတယ် ....။
ဆရာမ စာမေးတာလဲမဖြေနှိင် အတွေးထဲမှာ ကောင်မလေးပဲပေါ. စာတွေ သင်နေတဲ. ဆရာမကို ဂရုမစိုက်ပဲ စာတွေရေးနေတဲ. ကောင်လေးကို ဆရာမခေါပြီး ကျိမ်နဲ. တီးတာကိုခံလိုက်ရတယ် ....။
ကောင်လေးနာရကောင်းမှန်းလဲ မသိ သူသိတာက အခု ကောင်မလေးပဲရှိတယ် အိမ်ပြန်ရောက်လဲ စာမလုပ် ကောင်မလေး ကိုပဲတွေးနေမိတယ် ဘာလို.စိုးမိုးနေ လဲအတွေးမှာ ပေါ. သေချာပါတယ် ငါ အရမ်းချစ်မိနေမိပြီ ပေါ. .....။
ကျောင်းဖွင်.ကာစ မိုးတွင်းမှာ ကောင်မလေးဟာ ကျောင်းသူအသစ် အနေနဲ. ကောင်လေးရဲ.ကျောင်းကို ရောက်လာတယ် ကျောင်းကိုရောက်လာတဲ.ကျောင်းသူ အသစ်လေးဆိုတော. လူတိုင်းက ဝိုင်းပြီး ဟောက်ချင်ကြတယ် နှိမ်ချင်ကြတယ် ...အဲ.လူတွေကို ကောင်လေး စိတ်တိုနေမိတယ် ဘာလို.လဲပေါ. ကောင်လေး ချစ်မိနေတာကိုး ကောင်မလေးက ချစ်ဖို.ကောင်းသလို စာလဲတော်တယ် အတန်းထဲမှာ အမြဲတမ်း ၁ ပဲ ဒါကြောင်.သူကို လုံးဝ မနာလိုကြဘူး မျက်လုံး ဝိုင်းလေးနဲ. ကောင်မလေးကို ကောင်လေးခမျာ တိတ် တခိုးလေး ချစ်နေမိတယ် .....။
ရင်ခုန်တတ်စ ဆယ်တန်းကျောင်းသားဘဝ မှာ ကောင်လေးဟာ ကောင်မလေးကို ရူးသွပ်နေ မိတယ် ညဆိုလဲ စာမကျက်နှိင် guide ရောက်လို.လဲ သူများနည်းတူ စာမပြန်နှိင် ဆရာမကလဲ အမြဲတမ်းဆူ ဆရာမက အမြဲတမ်း မခံချင်စိတ်နဲ. စာကျက်အောင် လုပ်တယ် ဘယ်သူတွေကဘယ်လို မင်းဒီလိုပဲ သွားမှာလားလုပ်နေတော.မှာလား စာမေးပွဲကျရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ. ......။
တနေ. ကောင်လေး guide ကို ကောင်မလေး လာအပ်တယ် သူမိဘတွေလဲပါတယ် ...ပျော်လိုက်တာဖြစ်ချင်း ကောင်လေးခမျာ ထခုန်မတတ်ပါပဲ အဲ.လိုနဲ.ပဲကောင်လေး လဲ စာပြန်လုပ်လာတယ် ဘာလို.ဆိုတော. ကောင်မလေး နဲ.နီးနေတာကိုး စာတွေပြန်လုပ်လာတော. ဆရာမလဲ စိတ်ချမ်းသာလာတယ် သူများနည်းတူ စာတွေပြန်လုပ်လာတာပေါ. .......။
တခါမှမချစ်ဘူး တဲ.ကောင်လေးဟာ ကောင်မလေးကိုပြောဖို.လဲ မရဲ ချစ်တာလဲ ရူးသွပ်နေမိတယ် ကောင်လေးချစ်တာကိုသိနေတဲ. ကောင်လေးရဲ.သူငယ်ချင်းဟာ ကောင်မလေး နဲ.နီးစပ် ဖို. ကူညီပေးတယ် အဲ.လိုနဲ.ပဲ ကောင်မလေး သူငယ်ချင်းတွေပါ သိကုန်တော. အကုန်ဝိုင်း ပြီး နီးစပ်အောင် အောင်သွယ် ပေးကြတယ် ရိုးသားပြီး ဖြူစင်တဲ. ကောင်လေးရဲ.အချစ်ကို ကောင်မလေးသိလိုက်တဲ.အချိန်မှာ ညင်း စရာမရှိတဲ. လူချစ်လူခင်ပေါတဲ. ကောင်လေးရဲ. ရိုးသားတဲ.စိတ်ဓာတ် ကြိုးစားတဲ.စိတ် ကြောင်. တခါမှ ရည်းစားမရှိဘူးတဲ. ကောင်မလေးဟာလည်း တခါမှ မချစ်ဘူးသေးတဲ. ကောင်လေးရဲ. ရူးသွပ်တဲ.အချစ်ကို နားလည် လိုက်တယ် ......။
ဒီလိုနဲ.ပဲသူတို.တတွေ ချစ်သူတွေ ဖြစ်လာခဲ.တယ် ချစ်တာမှ ကောင်မလေးကလဲ တခြားကောင်မလေး တယောက် ကောင်လေးနားမှာ စာကျက်တာပဲဖြစ်ဖြစ် လာထိုင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် မကြိုက်ဘူး ကောင်လေးကလည်း ကောင်မလေးကို တခြားကောင်လေး ကစတာနောက်တာ လုံးဝမကြိုက် အတန်းထဲမှာ သူတို.လောက်ချစ်တာ မရှိ ....အဲံ.ဒီလောက်ထိချစ်ကြတာ...။
တနေ. သူတို. guide ကဆရာတွေ ဆရာမတွေ မသိအောင် အိမ်က မိဘတွေလဲမသိအောင် ခိုးပြီး ဘုရားသွားတယ် ပြိးတော. ဆုတောင်းကြတယ် ကောင်လေးက ကောင်မလေး နဲ. အတူ ထာဝရရှိနေဖို. ချစ်ဖို. ဘယ်တော.မှလမ်းမခွဲကြေး ရယ် ဒီဆယ်တန်း ကို ဂုဏ်ထူးတွေနဲ. အောင်မြင်ဖို.ရယ် နောက်ပြီး သေရင်တောင်မှ အတူ သေမယ် အဲ.ဒီလောက်ထိရူးသွပ်စာနဲ.ပဲ ဆုတောင်းခဲ.ကြတယ် ကောင်မလေးလဲ ထိုနည်းတူပဲ ဆုတောင်းခဲ.ကြတယ် .......။
ဒီလိုနဲ.ပဲ ဆယ်တန်း ဆိုတဲ. စာမေးပွဲကြီး နီးလာပြီ ကောင်လေးက ကောင်မလေးကိုမေးတယ် ကောင်မလေး နင် ဂုဏ်ထူးတွေနဲ.အောင်ရင် ဘာလုပ်မလဲပေါ. ကောင်မလေးက ဆရာဝန်ကြီးလုပ်မယ်ပေါ. ......ဒါနဲ.ကောင်မလေးကလဲ နင်ရော ဆယ်တန်းအောင်ရင်ဘာလုပ်မလဲပေါ. ကောင်လေးက ငါလား ငါက စစ်ဗိုလ် ကြီးလုပ်မယ် နင်ကဆရာဝန်ကြီး ငါက စစ်ဗိုလ် ကြီး ဘယ်လောက်လိုက်ဖက်သလဲ သူတို. ရဲ. စိတ်ကူးတွေကိုပြောရင်း တယောက်လက် တယောက်ကိုင်က ဆုတောင်းလိုက်ကြတယ် ဖြစ်ပါစေလို.ပေါ. ရယ်မော ပျော်ရွင်စွာနဲ. အဲ.နေ.လေးဟာ သူတို. ၂ ယောက် အတွက် တန်ဖိုး မဖြတ်နှိင်တဲ.နေ.လေးပေါ. .......။
ဆယ်တန်းစာမေးပွဲကြီး စပါပြီ ကောင်မလေး က ကောင်လေးကို လက်မထောင်ပြလိုက်တယ် နင်သေချာဖြေနော် တဲ. ကောင်လေးက စိတ်ချပါ ကောင်မလေး ပေါ. ပြုံး လျက် လက်မထောင်ပြလိုက်တယ် .....ဒီလိုနဲ. ဖြေလာလိုက်တာ စာမေးပွဲတွေ ပြီးသွားတော. ကောင်လေးက ငါတော. အောင်ယုံ ဖြစ်မှာပါ နင်ရော နင်ကတော. ဂုဏ်ထူးတွေ အများကြီးပါမှာပါ ငါယုံကြည်ပါတယ် ကောင်မလေးက အင်း ငါ ၅ ခုလောက်ပါမယ်ထင်တယ် ငါတို. ရည်မှန်း ချက်တွေ အောင်မြင်မှာပါ နော် ကောင်လေးက ပြောတော. ကောင်မလေးက ဘာလို. မအောင်မြင်ရမှာလဲ ယုံကြည် တယ် ငါတို.အောင်မြင်ရမယ် ......။
ဒီလိုနဲ.အောင်စာရင်း ထွက် မယ.်ရက် ကို ရင်ခုန်စွာနဲ. စောင်မျော် နေကြတယ် ......ဒီလိုနဲ.ပဲအောင်စာရင်း ထွက်မယ်. ရက်ကို ဆိုက်ဆိုက်မြိုက်မြိုက် ရောက်လာပါတယ် အောင်စာရင်း ထွက်မယ်.နေ.မှာ ကောင်မလေးက သူ မကြည်.ရဲလို. ဆိုပြီး ကောင်လေးကိုကြည်.ခဲ.ပါပေါ. အဲ.နေ.မှာပဲ အောင်စာရင်းထွက်တော. ထင်တဲ.အတိုင်းပဲ ကောင်မလေး က ဒီ ၅ ခုပါတယ် ကောင်လေးက တခုနဲ. အောင်မြင် ခဲ.တယ် .....။
ကောင်လေးဟာပျော်လွန်းလို. ဆိုင်ကယ်ကို လီဗာ အကုန် ဆွဲပြီး ကောင်မလေးကို ပြောရန် အမြန်မောင်းလာတယ် အဲ.အချိန်မှာပဲ ခွေးတကောင်က ဖြတ်အပြေးမှာ ဆိုင်ကယ်ဟာ အရှိန်မ ထိန်းနှိင်ပဲ လမ်းဘေး က ချောက်ထဲ ကျသွားတယ် ကောင်လေးဟာ အဲ.ဒီနေရာမှာပဲ ပွဲချင်းပြီး သေသွားတယ် ဒီသတင်း ကို ကောင်မလေးသူငယ်ချင်းတွေက ကောင်မလေးဆီအ မြန် သွားပြောတော. ကောင်မလေးမှာ မျက်ရေတွေ ကျရင်း စက်ဘီးကို ထုတ်ပြီးသူငယ်ချင်း တွေ တားတဲ.ကြားက အမြန် နင်းပြီး ထွက် လာတယ် မိုးတွေကလဲ အဲ.မနက် မှာသဲကြီးမဲကြီး ရွာလို.ပေါ. မိုးတွေသဲကြီးမဲကြီးရွာနေချိန်မှာ ကောင်မလေးဟာ ထီးမပါပဲ စက်ဘီး နင်းပြီး အမြန် ထွက်လာတယ် .......။
" ဝုန်း" ကနဲမြည်သံ နဲ. အတူ လမ်းကွေ.ချိုး ကထွက်လာတဲ. ကားကလဲ မိုးအရမ်းရွာနေတဲ. သဲသဲကွဲကွဲ မမြင် ရတဲ.အချိန်နဲ. ကောင်မလေးစက်ဘီးကို တိုက်မိသွားတယ် ကောင်မလေးနဲ. လမ်းကွန်ကရစ်နဲ. ခေါင်းနဲ.ပြန်ရိုက်မိတာ အဲ.ဒီနေရာမှာပဲ ပွဲချင်းပြီးသေသွားရှာတယ်........။
အော်.........................အခုတော. ကောင်မလေးနဲ.ကောင်လေးရဲ.ရည်မှန်းချက် တွေ ဖြစ်လာနှီိင်ပေမယ်. လည်း သူတို.ရဲ. ရည်မှန်းချက်တွေ ချစ်ခြင်းတွေ ဟာ တခဏ အတွင်းမှာ မိုး နဲ.အတူ ရေတွေထဲမှာပဲ သူတို.ဆုတောင်းလေးအတိုင်း သေလဲအတူတူသေရအောင် ဆိုတာ ပြည်.သွားလေသလား ????? ထာဝရပြီးဆုံး သွားရှာလေပြီ........။
ဒီပို.စ်လေးကို ဘာရယ်မဟုတ်ဘူး ညီမ နှင်းဆီ ဖြူ tag ချက်ရယ်ကြောင်. အကြိုက်ဆုံး ရာသီ ဆိုတာနဲ. စာလဲမရေးဖြစ်တာနဲ. စိတ်ကူးထဲပေါလာတဲ. ဇာတ်လမ်းလေး တပုဒ်ပါ ......အကြိုက်ဆုံးကတော. မိုး ....လွမ်းစရာကတော. ဆောင်းတွင်း မနက်ခင်း လေးမှာ ချမ်းချမ်း လေးနဲ. မေမေနဲ. အတူတူ အိပ်ရတာကို အရမ်းလွမ်းတယ် ဒါပေမယ်. စလုံးက ဆောင်းရာသီမရှိတော. ခံသာသေးတယ် ....။ ကဲ ညီမ နှင်းဆီဖြူရေ ကျေနပ်မှာပါ ...
thadarhline July 8, 2010 at 1:19 AM
တကူးတကလာမေးတာကျေးဇူးနော်..။ အမလည်း နေမကောင်းလို့..။
blackroze July 9, 2010 at 10:27 AM
emodoll July 10, 2010 at 6:13 AM
ဗြဲ... သနားစရာကြီး... ငိုချင်လာပြီ.. အဟင့် ရွှတ်ဖက်... အဲလောက်တောင် ရက်စက်ရလား စာရေးဆရာရယ်..
ngwelamin July 14, 2010 at 1:30 AM
Copyright © 2009 LAMINTAYAR |Designed by EZwpthemes |BloggerTemplate Converted by BloggerThemes.Net